शेयर बजारमा होमिनु भएको छ ? यी कुरा ध्यानमा राख्नुस् « Arthabazar.com
शेयर बजारमा होमिनु भएको छ ? यी कुरा ध्यानमा राख्नुस्
प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०७८, बिहीबार १२:३७
बलियो कम्पनीहरु छान्नुहोस्
पैसा स्टकमा लगानी नगर्नुहोस् र कडा आधारभूत कम्पनीहरू छनौट गर्नुहोस्। यसले स्टक बजारको उतार चढावहरूको सामना गर्न सक्षम हुने कम्पनीहरूको केही आश्वासन प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, यी दीर्घकालीन मा राम्रो प्रतिफल प्रदान र लगानीकर्ताहरु को लागि अधिक तरलता प्रदान गर्दछ।
अनुसन्धान गर्नुहोस् र उचित लगनशीलता गर्नुहोस्
धेरै व्यक्ति अनुसन्धान गर्नबाट बञ्चित गर्छन् किनभने तिनीहरू प्रयास गर्नबाट बच्न चाहन्छन् वा किनभने तिनीहरू प्राविधिक शब्दावलीहरू बुझ्दैनन्। यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण छ कि लगानीकर्ताहरूले अनुसन्धान कम्पनीहरू र स्टक बजारमा उचित निर्णय लिन समय निकाल्छन्। कम्पनीमा लगानी गर्नु भन्दा पहिले यसको बारेमा पर्याप्त लगनशीलता गर्नाले लगानीकर्तालाई भविष्य बुझ्न सहयोग गर्दछ।
विश्वासिला मध्यस्थहरूको साथ काम गर्नुहोस्
यो लगानीकर्तालाई भरपर्दो र भरपर्दो मध्यस्थहरूसँग व्यवहार गर्न लाभदायक हुन्छ। एक सुरक्षित र सुरक्षित ट्रेडिंग प्लेटफर्म प्रदानको साथ, त्यस्ता मध्यस्थहरूले मूल्य-वर्धित सेवाहरूको एक संख्या प्रदान गर्दछ। तिनीहरू प्रायः अनुसन्धान रिपोर्टहरू र शेयर बजारको बारेमा अन्य उपयोगी जानकारी प्रदान गर्छन्।
कम मूल्यको स्टकमा लगानी नगर्नुस्
कम मूल्य भएका स्टकहरू, प्राय: पेनी स्टकको रूपमा चिनिन्छन्, ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्दछन्। यसको मुख्य कारण यो हो कि यी स्टकहरूले ठूलो नाफा कमाउनको लागि विशाल क्षमता प्रदान गर्छन्। जे होस्, पैसाको शेयर लगानीसँग सम्बन्धित जोखिमहरू धेरै अधिक छन्। लगानीकर्ताहरूलाई सम्झन सल्लाह दिइन्छ कि कम्पनीको सेयरको खराब प्रदर्शनको कारण यसको मूल्यांकन गरिएको छैन र यसमा लगानी गर्नबाट जोगिनु बुद्धिमानी हो।